Beeca xoolaha ee Mandera oo dib u eegis lagu sameyn doono | Star FM
Home Wararka Kenya Beeca xoolaha ee Mandera oo dib u eegis lagu sameyn doono
Beeca xoolaha ee Mandera oo dib u eegis lagu sameyn doono
Guddiga hilibka ee dalka ee KMC ayaa shaaca ka qaaday in saddexdii biloodba dib u eegis lagu sameyn doono qiimaha lagu kala iibsado xoolaha nool ee ismaamulka Mandera.
Tani ayaa timid ka dib markii KMC ay shacabka ka qayb gelisay kulamo wacyigelin ah oo looga hadlayay howlaha suuqa xoolaha.
Colonel Waluke oo ka mid ah saraakiisha guddigan u qaabilsan soo iibsashada ayaa sheegay in xoolo dhaqatada la fahansiiyay siyaabaha ay u iibin karaan xoolahooda iyo caqabadaha ay la kulmaan beeralayda.
KMC ayaa intaasi ku dartay in maalin kasta la qali doono 200 oo neef tani oo bishii noqonaysa 6000.
Sanadkii hore ayay ahayd markii wasiirka beeraha iyo xoolaha ee dalka Peter Munya uu xoghayaha waaxda xoolaha nool Harry Kimtai ku amray in uu dardargeliyo sidii KMC loogu wareejin lahaa wasaaradda difaaca ee dalka ka dib amar uu bixiyay madaxweyne Uhuru Kenyatta.
Hasa ahaate bishii labaad ee sanadkan ayay maxkamadda go’aankaasi waxba kama jiraan ka soo qaaday ka dib markii ururka qareenada wadanka ee LSK uu gudbiyay dacwad uu arrinkan kaga soo horjeedo.
Previous articleMaraykanka oo taageeray go’aan ka soo baxay golaha nabadda ee Midowga Afrika
Next articleDHAGEYSO:Danyarta Dadaab oo codsanaya in lagu caawiyo afur iyo suxuur